गुल्मीको सत्यवती गाउपालिकामा पहिरोमा पुरिएर १३ जनाको मृत्यु, उद्धार कार्य जारी ! – ebaglung.com
२०७६ श्रावण ७, मंगलवार १३:४५	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
मृतक मध्य १० जनाको सनाखत !
रामप्रसाद घिमिरे, गुल्मी २०७६ साउन ७ । गुल्मी जिल्लाको सत्यवती गाउपालिकामा पहिरो जानाले १३ जनाको मृत्यु भएको छ । सत्यवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष पारेश्वर ढकालका अनुसार एक घरमा पहिरोले पुरिएका ४ जना मध्य दुई जनाको शव निकालिएको र दुई जनाको उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएकाको उपचारका लागी स्वास्थ्यकर्मीको टोली लिएर जाँदै गरेको अध्यक्ष ढकालले बताए ।
हिँजो राति देखी परेको भीषण असिना पानीले सत्यवती गाउपालिकाको वडा नं ३ मा गएको पहिरोले एकै घरपरिवारका ९ जना पुरिएको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । अध्यक्ष ढकालका अनुसार केहि दिन पहिले पनि सोहि गाउँमा भीषणा वर्षा सँगै परेको असिनाले तरकारी अन्नबाकलीको ठुलो क्षेती पुराएको थियो र आज सोहि ठाउँमा पहिरो गएर मानवीय क्षेती भएको छ । उद्धार कार्य जारी रहेको छ ।
गाउपालिकाको कार्यालय देखी ५ घण्टाको दूरीमा रहेको उक्त गाउँ रहेको र आफु स्वास्थ्यकर्मीहरुको टोली लिएर जाँदै गरेको बताए ।
सत्यवती गाउपालिकाका अध्यक्ष पारेश्वर ढकालसंग गरेको कुराकानी
मृत्यु हुनेहरु १० जनामा सत्यवती गाउँपालिका ४ लिम्घामा ६५ वर्षिय छल्ली बिक, ३० बर्षिय निर्मला बिक २८ वर्षिय पम्फा बिक १२ वर्षिय अंजली बिक, १० वर्षिय हेमन्त बिक, ७ बर्षिय सिवानी बिक, ७ बर्षिय हिमान्सु बिक र रुपा बिक रहेका छन् ।
त्यस्तै सोहि गाउँपालिका ३ को ठूलोलुम्पेक कसिनिडाँडाको पहिरोमा पुरिएर ३२ वर्षिय तिलकुमारी त्रामु, ९ वर्षिय दर्शन त्रामु मृत्यु भएको हो । उनिहरु आमा छोरा भने सोहि वडाकै रुद्र बिकको घर पहिरोले बगाएको छ । पहिरोले घर बगाउँदा ४० वर्षिय मायाँ बिक र १६ वर्षिय गबि बिक बेपत्ता भएका छन् । पहिरोमा पुरिएर २ जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेहरुमा सत्यवति ४ का १० वर्षिय करिश्मा त्रामु र १३ वर्षिय धनि त्रामुको घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उद्धारको लागि जिल्लाबाट प्रहरी नायव उपरिक्षक मिनबहादुर घले, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक दिनेश रामयमाझी सहितको टोली घटना स्थलल पुगेर उद्धार कार्य सुरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथपौडेलले बताए । थप राहत र उद्धारको लागि जिल्ला बिपद व्यवस्थापन समिति तयारी अबस्थामा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेले बताए । ठूलो पहरो भएकाले मृत्यु हुनेहरुको संख्या बृद्धि हुनसक्ने बताइएको छ । पहिरोले लिम्घासमा ४ घर जोखिममा रहेका छन् । उनिहरुलाई स्थानिय बिद्यालयमा राखिएको छ ।